इनरुवाका सडकमा खाल्डै खाल्डा तर पुर्ने कस्ले ?? - inaruwaonline.com
इनरुवाका सडकमा खाल्डै खाल्डा तर पुर्ने कस्ले ??
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १७, २०७४ समय: ६:५८:११
अमर काफ्ले इनरुवा/इनरुवाका सडकमा यतिवेला निकै खाल्टा खुल्टी देख्न सकिन्छ । भत्केका सडक अनि बेलैमा मर्मत नगरिँदा खाल्टो बनी जमेको पानीले सडकको अवस्था दयनिय बनेको छ ।
कालोपत्रेको अस्थित्व खोज्ने जमातको कमी छैन् । सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा जमेको पानीमा लुकेका खाल्टा दुर्घटनाको कारण नबन्ला भन्न सकिन्न् । घामलाग्दा परैबाट सहजै देखिने ठुलाठुला खाल्टाहरु पानी पर्दा भने जम्ने गरेको पानीका कारण नदेखिन सक्छ । जसले दुर्घटनाका सम्भावनाहरु नर्कान नसकिने स्थानीयको भनाई छ । स्थानीयवासी सडकमा जताततै परेका खाल्टाका कारण बजारमा जाम बढ्न थालेको बताउँछन् ।
सवारीसाधनको बढ्दो चापले अस्तव्यस्त बन्दै गएको सडक पछिल्लो समय खाल्टा खुल्टी थपिंदा दुरावस्थामा परिणत हुन पुगेको स्थानीय बालानन्द झा बताउँछन् । साना खाल्टा बेलैमा नपुरिँदा यतिबेला निकै ठुला भएकाछन् । इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालयले त्यसतर्फ चासो नदिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । दुर्घटना निम्तेपछि मात्र आँखा पुग्ने होला भन्दै सरोकारवालालाई लक्षित गरी प्रश्न तेस्राउने स्थानीयहरु समस्याको समाधान बेलैमा गर्नु जरुरी रहेको अौल्याउछन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवाका पूर्व अध्यक्ष कैलाश पञ्चारिया बाटोको सन्दर्भमा नगरपालिकामा जानकारी गराउँदा समेत वेवास्ता गरिएको बताउँछन् । सडकमा कुद्ने सवारीका साधन खाल्टोमा बजारिँदा उत्पन्न हुने दिनहुँको कम्पनले भौतिक पूर्वाधारमा क्षति निमत्याउने अवस्थालाई समेत सम्भावनाका रुपमा बढाएको उनको भनाई छ ।
खाल्टाले बढाएको जोखिम कम गर्न नपामा अनुरोध गर्दा ठेक्का लागेको बाटो बिस्तारै बन्छ भन्ने जवाफ फर्काइनु नपाका कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपन भएको सर्वसाधारण बताउँछन् । बेलैमा मर्मत गरिएकोभए जटिल अवस्था सीर्जना नहुने बताउने स्थानीयहरु ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनका कारण यतिवेला नगरमा दुर्घटनाको सम्भावना बढाएको बताउँछन् ।
मूख्यगरी इनरुवाको लोकतान्त्रिक चौकदेखि सखुवागाछी सम्मको सडकमा जताततै खाल्टा छन् । साइकल, मोटरसाइकल, विद्युतिय रिक्सा सहित सवारीका अन्य साधन भत्केका सडक र सडकमा परेका खाल्टाका कारण संचालनमा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ । इनरुवाका अन्य सडक समेत भत्केर खाल्टा पर्ने क्रममा छन् । लोकतान्त्रि चौक हुँदै जिल्ला समन्वय समितिसम्मको बाटोमा समेत प्रशस्तै खाल्टाखुल्टी परिसकेका छन् । त्यसतर्फ समेत बेलैमा ध्यान नदिए बढ्दै जाने साना खाल्टा इनरुवा नगरपालिकाकालागि ठूलो दुर्घटनाको कारक नबन्ला भनेर नर्कान नसकिने स्थानीयहरु बताउँछन् ।
सो विषय इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालय भने खाल्टा पुर्ने तयारीमा आफुहरु लागि परेको बताउँछ । स्मार्ट सिटी योजना अन्र्तगत सखुवागाछी बबिया सडक ढल सहितको कालोपत्रे, सोलार बत्ति र वृक्षारोपणको कार्य शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत अघि बढ्ने भएपनि हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यालयले छिटै काम थाल्ने कार्यकारी अधिकृत टुबराज पोखरेल बताउँछन् । कालोपत्रे नगरेपनि गिटी हालेर भएपनि खाल्टा पुरेर हालको सडकलाई सहज अवस्थामा ल्याइने पोखरेलले बताए । सो प्रयोजनकालागि तत्कालैबाट पहल थाल्ने उनले प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।